Akhriso: Maxaa Keenay Khilaafka Madaxda Galmudug? – Goobjoog News
Akhriso: Maxaa Keenay Khilaafka Madaxda Galmudug?
Kadib mowqif maanta ay arrinta Galmudug ka soo saareen 8 Senator iyo 27 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee laga soo doortay deegaankaas, waxaa ku cad in dhibaatada maamulka ay ka dhalatay kadib markii la hareer maray heshiiskii Galmudug iyo Ahlu-sunna ay December sanadkii hore ku gaareen dalka Djibouti.
Xildhibaannada federaalka ah waxaa ay qoraalkooda ku sheegeen “Qaabka loo hirgaliyey heshiiskii jabuuti in uusan ahayn mid waafaqsan qodobadii heshiiskaas ku xusnaa gaar ahaan qaabka la isugu daray labada barlamaan oo aan isku dheelitirnayn & inaan la tixgalin awood qeybsigii beelaha reer Galmudug ku heshiiyeen.
Xildhibaan Garaad Yusuf Maxamud oo ka tirsan baarlamaanka Galamudug ayaan wax ka weydiinnay cabashada jirta iyo qaabka wax looga qaban karo.
Xildhibaan Garaad waxaa uu sheegay in qodobbada heshiiska Djibouti ay ku jireen in si simman loo qeysado baarlamaanka, lana tixgeliyo awood-qeysiga beelaha, laakin taasi iska indho-tireen Alhu-sunna iyaga oo keenay baarlamaan ka kooban 118 Xildhibaan halkii laga rabay 89 Xildhibaan.
Arrinta kale oo Ahlus-sunna lagu heysto sida Xildhibaanka sheegayo waa in aaney tixgelin awood qeybsiga beelaha dega Galmudug, waxaa intaas dheer, waxaa baarlamaanka Ahlu sunna ku jira dadka ka soo jeeda Puntland iyo Hirshabeelle, oo beelahooda aaney degin Galmudug.
Xildhibaannada baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya ayaa soo-jeediyay in mudada xil-haynta hey’adaha sharci-dejinta iyo fulintu ay ku kala eg tahay sida uu qabo dastuurka Galmudug bilaha Juun 2019 & July, 4 2019 sida ay u kala horeeyaan……taasi oo ay ka muuqato in Galmudug sanadka soo socda ka dhici-doonto doorasho guud.
Baarlamaanka Galmudug oo bartamihii 2017-kii anisixyay in bishii gunno ahaan qaataan $1000 ayaa la sheegayaa in aanay muddo sanad helin wax mushaar .
Haddaba, Halkan Ka Akhriso, Heshiiska Djibouti Ku Gaareen Galmudug iyo Ahlu sunna:
Kaydka Goobjoog Select Month May 2021 (53) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
Join 454,070 other subscribers